Mpempe akwụkwọ, French, ákwà mgbochi Rom na kichin - imepụta echiche
Ihe mgbochi na kichin - esi eme ka icho mma dị mma?
Ebe a na-eri nri kwesịrị ịdị mma ma mara mma. A ga-ejikọta ákwà mgbochi na kichin na ime ime ụlọ ahụ, gbanwee ohere. Ha na-eme ka ikuku na-ekpo ọkụ n'ime ime ụlọ, nke nwere izu ike na nkwurịta okwu. Ụdị ụdị dị iche iche na akwa nke ákwà ngebichi ga-enyere aka mee ka ihe atumatu na-amasị ma zuru ezu.
Ihe mgbochi n'ime ime ụlọ
Site na ákwà webs, ha na-eku ume, ha na-eme ka ebe iri nri dịkwuo mma. Echiche ndị oge a maka ákwà ngebichi maka kichin anaghị ejedebe na ákwà nro dị mma na nchịkọta. Nhọrọ maka ịmepụta oghere windo site na mpịakọta na ndị Rom na-ekpuchi ka acho na-adọrọ adọrọ na luxuriously pompous canvases na lambrequins. N'ihi na ákwà ngebichi kichin kwesịrị ịrụ ọrụ (dị mfe imeghe) na ngwa (ngwa ngwa ehichapụ). Ụdị dị mkpirikpi dị mkpa maka obere ụlọ, na ikpochapụ tulle na ákwà ngebichi n'ala - iji jikọta ọnụ ụlọ ahụ na ime ụlọ iri nri.
Ndị Rom na-ezochi na kichin
Nhazi oge a na-achịkwa iwu ya - nkọwa kachasị oke na ihe kachasị mma. Ihe mkpuchi Rom na-ekpuchi anya na kichin - ákwà eji ewuli elu, nke usoro eletriki ma ọ bụ akwụkwọ ntuziaka na-achịkwa, nke na-anakọta ihe ahụ dịka ihe ọbụla. Anya ha na-eme ka ụlọ ahụ mara mma. Ndị isi nke Rom na-adaba n'ụdị n'ụdị dị iche iche, ha nwere ike ịgbakwasị ha n'onwe ha, jikọtara ya na a lambrequin, tulle na ákwà ngebichi. Ọ bụrụ na imeghị ụlọ ahụ n'ụzọ dị mma, ọ kwesịrị ekwesị iji foto ndị mara mma na kọmpụta ma ọ bụ iji bulie ihe dị iche iche iji mepụta otu olu.
Roller na-ekpuchi na kichin
Nke a bụ ihe ọzọ ị ga-ahụ maka ịchọta ihe dị irè. Nyefee ákwà mgbochi na kichin mgbe ị na-arịgo na-agbawa n'elu ala, gbakwunyere n'elu ogidi window ahụ. A na-eji ákwà, bamboo straw, plastic. A na-ahọrọ ákwà mgbochi linin na kichin na-acha otu ma ọ bụ na-enwe ụdị n'ụdị okooko osisi, nnụnụ, mkpịsị mkpụrụ, mkpụrụ osisi, iko na mmanya ma jiri ha mee ihe ọ bụla. Ndị na-ekpuchi windo na-eji foto na-enwu gbaa - a na-emepụta ejiji, mepụta ihe na-egbuke egbuke na windo. Ememe salboo dị mma maka ụdị eco-style. Mkpọpu na-eme ka ọ ghara ikwe ka ohere ma ọ bụ ebe ọ bụla.
Ihe mgbochi nke eri na kichin
Kisei na windo bụ ihe atụ mara mma nke ákwà ngebichi. Ọ bụ ihe mgbochi nke filaments na-ada site na mmiri. Ihe dị otú a dị irè - ọ naghị adị ọcha na anaghị etinye aka na evaporation. A na-achịkọta ákwà mgbochi na kichin n'ime eriri, na-ejide ya na enyemaka nke nkwụnye, ụta, akara, butterflies. Site na muslin ọ dị mfe ịmepụta multilevel, arched composition, ọ na-ejikọta na iko iko, beads, na lambrequins. Ihe ndị na-akpali mmasị bụ ihe jikọrọ ọnụ nke eri. Site n'enyemaka nke a na-eme ka ọ dị mfe ịkekọrịta ohere n'ime mpaghara. Ọ na-enye ohere iji ọnụ ụzọ mbara ihu eme ihe n'enweghị ihe ọ bụla.
Ihe mgbochi na kichin na a lambrequin
Iji mee ka icho mma jiri akụkụ dị iche iche. A na - agbakwunye ogologo ákwà ngebichi na kichin na drapery labaquin - horizontal n'ime oghere nke oghere. Ụdị maka ya ka mma ịhọrọ n'ụdị svag na ebe dị nro ma ọ bụ tụfuo ịchafụ site na ọka. Maka mmepe obodo, a na-emepụta drapery n'elu oghere windo n'ụdị obere mkpirisi.
Ihe mgbochi na lambrequins dị mma maka nri oge ochie. Ha bụ tulle na-ekpo ọkụ ruo n'ala nke nwere ákwà mgbochi siri ike, nke gwakọtara ya, ihe ndozi. Akpado osisi siri ike, na-agbatị aka, nke nwere ogologo ma ọ bụ nke na-enweghị ntụpọ, ha na-ejikarị akwa textures abụọ. Ha na-adabara maka ojiji na obere ákwà ogologo.
Ihe mgbochi na kichin na eyelets
Nke a bụ ihe eji emepụta windo nke oge a, ákwà ngebichi bụ ákwà a na-ahụ maka ya, nke a na-agbanye n'ahịrị dị iche iche, na-adaba na ọka. Nkịta dị n'egedege anya na-ada site na n'elu ma na-etinye aka na ntanetị, na-eme ka ọ dị ọcha, na-ele anya ya. Ogwe ndị ahụ dị mfe ịkwaga, ha dị ogologo ma ọ bụ mkpụmkpụ, na-esite na ihe omimi ma ọ bụ na ụkpụrụ. Ngwa textures siri ike na-emepụta creases.
Ihe mgbochi na kichin na eyelets adịghị mkpa ka mma ọzọ, mgbe ụfọdụ textures na ihe ngosi nwere ike ịghọ ihe ndozi maka windo ahụ. Ihe kachasị mkpa ha bụ na ịma mma nke ákwà ahụ. Dịka ọmụmaatụ, a na-ahọrọ ákwà ngebichi na kichin na ụdị nke Provence na obere floristic oyiyi nke lavender, ebe nri bouquets na agba aja aja, oliv. E nwere ike iji ya na ntutu isi chọọ ya mma n'ụdị okooko osisi. Egwuregwu mikochrome na egbugbere nke ìhè, agba oyi na-adaba maka ime ma ọ bụ ọgbara ọhụrụ.
Ogwe dị mkpịsị na kichin
Uche nke ákwà mgbochi dabere na ọnụ ụlọ ahụ. N'ime obere ụlọ iji chekwaa ohere, jiri ụdị ejiji dị mfe, ihe kachasị mkpa nke ákwà ngebichi dị na kichin bụ:
Ogwe nke Austrian - na-etolite ọmarịcha mma n'akụkụ ọnụ ala nke mejupụtara. Ngwurugwu na-adị mfe ịmalite site na tulle, taffeta, icho mma na fringe, brushes, ribbons, ruffles;
Uche French maka kichin - si n'elu ụlọ rịdata na ọtụtụ ahịrị. A na-eji ha dị arọ, translucent, eji akwa drape fabric;
ákwà ngere "cafe" - nke dị na atọ nke atọ nke oghere, nwere ike ịgbakwunye okpokoro. Ihe nlereanya a bara uru maka ime obodo, Provence;
ákwà ngebichi na podvhvatami - ụdị ndị a kachasị ewu ewu, bụ ákwà ngebichi dị mkpirikpi nke e ji akpụkpọ anụ mee, nke a na-anakọta site na otu ma ọ bụ n'akụkụ abụọ, nwere ike ịkwado ya na lambrequins, ruffles;
ákwà ngebichi maka kichin - nwere ọdịdị ọdịdị na akụkụ elongated na akụkụ dị mkpirikpi. A na-eji ihe mkpuchi, drapery, oghere a mapụtara nke ọma, chọọ windo sikwa na osisi ndụ dị mma;
ákwà mgbochi na kichin na mbara ihu - ọnụ ụzọ na-agbado ihe nlereanya ahụ n'ala, na windo - tulle airy, nke a na-ejikọta n'akụkụ ya, ma ọ bụ na-eme ka ogologo nke window sill. Lambrequin n'elu ga-ejikọta ihe mejupụtara.
Echebe ákwà maka kichin
Ihe ngere maka ebe iri nri bụ isi ihe na-eweta nkasi obi. A na-anọchi anya ákwà mgbochi nke oge a maka igwe kichin, ákwà mkpuchi na-achachi anya, na ụdị ndị a na-ahụ maka ihe ndị dị oké ọnụ. Ihe ngwọta nke ebe iri nri dị nnọọ iche. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta ebe dị jụụ, ị ga-ahọrọ aja aja, agba aja aja, ụda anụnụ anụnụ. Oroma, uhie uhie ga-eme ka ụlọ ahụ nwekwuo obi ụtọ. Ndị na-akwado ịdị ọcha na n'usoro ga-eru nso na-acha ọcha snow-ákwà ọcha. Ogwu nwere ike ichebe isi nke mgbidi ma ọ bụ iche na ha.
Ulo na-acha odo odo na kichin
Ihe dị otú ahụ, dị ka ebe ọhụụ, nwere ike ịgbanwe ọnọdụ dị na ya. Ulo na-acha odo odo na kichin kwesịrị ekwesị maka ime ụlọ dị n'akụkụ ugwu. Maka nke a, a chọrọ ụdị nke karọt na-egbuke egbuke, agba mmanụ agba - ha gbakwunye ọkụ, okpomọkụ na ike dị n'ime ụlọ ahụ. N'ụlọ dị n'ebe ndịda ọ ka mma ịchọta onyinyo dị nwayọọ - piich, salmon, apricot. A na-eleba anya na mpempe akwụkwọ oroma na kichin, ha ga-ejikọta ya na ihe ndị yiri ya, oche, akuku ihe eji eme ihe - akụkụ ụfọdụ nke ihe ndị ahụ. Ụdị agba a jikọtara ya na:
agba aja aja - n'ụdị fringe, arịa ụlọ osisi;
ọcha mgbidi ma ọ bụ tulle;
green - a gamma eke, ị nwere ike iji na -emepụta windo mara mma;
Black - eji mee ihe mgbe ị na-ekepụta atụmatụ futuristic.
Ulo mgbochi na kichin
Ọ bụ agba nke udo na obi iru ala. Obere obere akwụkwọ nri na kichin agaghị afụ ụfụ, karịsịa ma ọ bụrụ na okooko osisi dị na windowill. E nwere ike ịmebe ákwà mgbochi ejiji na kichin na nkpọkọ dị otú ahụ:
ìhè translucent light;
acha ọcha ọcha na eyelets nwere nnukwu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ;
obere osisi abụọ dị iche iche na-acha uhie uhie site n'ụdị dị iche iche nke ákwà, site na-acha ọcha, site n'elu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-eji ya mma. Osisi Olive na-ejikọta ya na ájá;
ìhè akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Roman woolo kwesịrị ekwesị maka igwe onu ogugu uzo nke a na-eji obere ihe;
otu nhọrọ na - adọrọ mmasị - ákwà ntanetị nke triangular, ogologo akụkụ nke na - adabere na n'akụkụ, ha na - emeghe window.
Ogige uhie na kichin
Ihe osise ndị dị otú ahụ nwere ike ịmeghachi n'ime ime ọ bụla, ha na-adọrọ mmasị. Ogige uhie dị mma maka ebe obibi, na-acha ọcha, na agba aja aja, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ụda isi. Na mpaghara kichin, ha na-ebuli agụụ na ọnọdụ. Dika ihe ndi ozo nke ga - eme ka uzo uhie nke window mechie, i nwere ike iji vases, efere, oriọna, mkpuchi ulo. Ụdị ákwà mgbochi maka kichin:
acha uhie uhie uhie ụdị ke n'ala na eyelets ma ọ bụ na podvhvatami, n'ụzọ zuru okè jikọtara na-acha ọcha n'ime ime;
oghere ndị na-acha ọbara ọbara ma ọ bụ ákwà mgbochi French nke tulle na-acha uhie uhie, organza, nke a na-achọ mma;
maka mmepụta mba, ngwaahịa ndị dị na igbe na-acha uhie uhie, kwụsịtụrụ na ákwà ma ọ bụ n'ụdị ákwà ntà "cafe";
Mmiri ara ehi na-ekpuchi anya na ihe na-egbuke egbuke n'ụdị okooko osisi na-acha odo odo, mkpụrụ osisi na akpaaka.
Ewube ákwà ọcha na kichin
Oghere nke na-egbuke egbuke nke windo kwesịrị ekwesị n'ime ime ọ bụla. Ogwe ákwà ngere maka obere kichin bara uru - ha na-eleba anya na ohere. Ihe atụ nke etiti window ahụ n'ụzọ dị otú a:
Ogwe ọnụ ntụ nke French na uwe mkpuchi na-elekwu anya na-acha ọcha;
a nwere ike ịchọta windo nke obere nchara na ákwà mgbochi nke ụdị ihe a na-atụgharị na ya;
A na-eji akwa ákwà na-acha ọcha na-acha ọcha akpụkpọ ụkwụ na-acha ọcha tulle na kichin kichin, nke nwere ihe dị iche iche, ihe osise dị iche, okooko osisi;
ákwà ngebichi na windo mmiri dị na kichin ka mma ịhọrọ site na igwe ọkụ na-acha ọkụrị - tulle, organza, ọ kwesịrị ekwesị iji ntutu isi, nchịkọta.
Ewube ákwà ngebichi na kichin
Nke a nke ihe ndozi nwere ike ịgbanwe ọnọdụ a. Ogwe ákwà mgbochi na-anọchi anya anyanwụ, ọ bụ agba nke ndụ na ike. Ha na-ele anya na-eme ka oghere dị elu, mee ka ụlọ ahụ dị ọkụ. Nhọrọ maka ákwà mgbochi na kichin na odo:
ọ bụrụ na a na-eme atụmatụ ahụ na ụdị oge a, ị nwere ike ịchọta lemon Roman blinds, ha ga-ejikọta ya na ihe ndị na-egbuke egbuke nke ụlọ;
a na-ahụ anya na-acha ọcha nke painiapulu nke na-adị ọcha na-acha ọcha;
Maka ụlọ nke oge ochie, ákwà ngebichi na-acha ọcha tulle dị mma;
obere ákwà mgbochi na kichin n'ime igbe ma ọ bụ na ifuru ga-adaba na nhazi obodo;
E nwere ike ịmebe Provence na ákwà mgbochi na-acha odo odo na ihe osise nke ụwa ma ọ bụ nke a na-ese onyinyo.
Ihe mgbochi na kichin - akụkụ dị mkpa nke imewe. Ha na-eme ka obi dị jụụ na ọnọdụ ha, jiri nlezianya kpuchie windo ahụ, na-arụ ọrụ nlegharị anya na ọrụ. Ihe mkpuchi ga-eme ka ụzarị ọkụ na ikuku nke anyanwụ na-acha, mee ya site na ngwa na ihe dị mfe dị mfe, n'ikwekọ na agba nke mgbidi na ihe ndị dị n'ime ụlọ ahụ. Ụdị a họọrọ nke ọma na ákwà ngebichi ga-enyere aka ịchịkwa ìhè nke ime ụlọ ahụ, chọọ ya mma, nye ya nzucha imezu.
Ụlọ Ụlọ Ọgwụ na-emecha
Ebube na-enwu enwu na-enwu enyo
Mkpụrụ obi na-adịghị ala
Ụlọ ọrụ na-emepụta quartz agglomerate
Mbadamba "akwa silk"
Kedu ka mma si etinye ákwà ngebichi?
Onye na-eme ka ọkpụkpụ na-ahụ maka azụ na n'olu
Ntak emi ikemeke nditịm nditọ ke isua kiet?
Ebe obibi na Latvia
Johnny Depp keere ndị bịara nleta na Disneyland nwere ngọngọ mmekọrịta
Kedu otu esi esi eji ajị anụ mee ọdụ?
Uwe na ikwiikwii
Mandarin achicha - na-atọ ụtọ ntụziaka na echiche maka decorating citrus dessert
Akwụkwọ akwụkwọ na ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ
Sinus tachycardia na ụmụ
Isiokwu na-ebipụta foto
Kedu esi esi kwatuo ala ala?
Omenala nke Malaysia
Rhinitis na-adịghị ala - mgbaàmà na ọgwụgwọ na ndị okenye
"Umu anwuru" - uzommeputa
Gịnị bara uru maka muesli?
Cissus - nlekọta ụlọ